Duufaanta Irma waxay kusii socotaa dhanka Waqooyiga Florida, qaybteeda waxay hoos ugu dhacday 1 | Saadaasha Shabakadda
Casudi casals | | Duufaannada
Irma marinkeeda Florida hadda
Magaalooyinka daadadka in kabadan 3 milyan oo guryo ah koronto la’aan iyo waxyeelo badan, waa raadadkii ay ku reebtay duufaantii Irma. Hada hoos loogu dhigay qaybta 1, dabaysheeda wali waxay ka sarreysaa 150km / saacaddii, waxayna ku taal oo keliya waqooyiga badhkeed ee Gobolka Florida.
Saacadaha soo socda, Irma waxaa la filayaa inuu ku sii socdo dhanka galbeed ee Florida, isagoo had iyo jeer ku sii jeeda Waqooyiga. Waxaa la filayaa inay markaa u sii leexan doonto dhanka koonfur-bari Mareykanka, halkaasoo ay sidoo kale ku waayi doonto xooggeeda. Mar haddii isha duufaanta ay ku taal aagga koonfureed ee Georgia ama ay weli ku taal aagga waqooyiga ee Gobolka Florida waxaa la filayaa inuu sii socdo in muddo ah, laakiin wuxuu noqonayaa duufaan kuleyl ah.
Cawaaqibta ka dhalan doonta
Dadka koronto la'aanta ku leh Gobolka Florida waxay matalaan 35% wadarta macaamiisha ayaa ka mid noqday adeegga korontada. Gobollada dhexdooda, shaqo la'aanta ugu daran ayaa noqotay Monroe, oo leh gooyn 83% meelaha. Miami-Daade, Meelaha kale ee ugu kulul ee Irma mari doono, waxay ka tagtaa 81% awood la'aan, gobolka ugu dadka badan Florida. Robert Gould, oo ah madaxweyne ku xigeenka mid ka mid ah shirkadaha korontada bixiya, ayaa sheegay in ay qaadaneyso todobaadyo in la soo celiyo oo la dayactiro dhamaan laydhka.
Qiimeyn lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan waxyeelada ay geysatay ayaa maanta la filayaa. Hore looma sameynin sababtoo ah awood la'aanta kooxaha samatabbixinta inay u dhawaadaan aagga. Waxaa suurtagal ah in tirada maaddooyinka iyo waxyeelada aadanaha ay kici karto. Waa la xaqiijin karaa marka ay duufaanku gebi ahaanba dhaafto. Tirada dadka ku dhintay Florida hadda waxay marayaan 3, waxay ku darayaan 29 halka ay sii marayaan oo ay marayaan Kaariibiyaanka.
Trump wuxuu saxiixay cadeyn masiibo weyn oo ka dhacday Florida, wuxuu hubiyaa inuu dhowaan booqan doono aagga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaanta Irma waxay kusii socotaa dhanka Waqooyiga Florida, qaybteeda waxay hoos ugu dhacday 1
Erayada waqtiga ku saabsan